Archive du 06-déc-2021
Raharaha ny “Apollo 21” Olona 13 nalefa teny Antanimora omaly
Hiakatra fitsarana anio 6 desambra ny raharaha “Apollo 21”, izay voalaza fa fikasana hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy olom-panjakana ambony.
Minisitra Patrick Rajoelina Tena mianatra ve sa mba manal’azy ?
Niteny frantsay ny Minisitry ny raharaham-bahiny Atoa Patrick Rajoelina nandritra ny fihaonana mivantana na “face à face” tamin'ny depiote,
Olona te ho ambasadaoro Dosie 303 no voarain’ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny
Ny 11 novambra 2021 no nosokafana ny antso fiantsoana fametrahana antontan-taratasy ho an’ireo te hotendrena ho Ambasadaoron’i Madagasikara any ivelany nataon’ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny.
Làlana ratsy be Anosibe-Anosipatrana Mba misy mpitondra mahita ihany ve ?
Efa an-taonany no nampitaraina ny rehetra ny làlana miala eo Anosibe mifanandrify amin’ny Farmasia Volahanta, mandalo ny trano 5 sy ry Masera dia mihazo an’Anosipatrana,
Telo taona aty aoriana Miha voaporofo hatrany ny fampiesonana tamin’ny propagandy
Efa hitan’izao fitondrana izao ilay fomba fanjonoana mpifidy na “marketing électoral”, hoy ny mpahaifiarahamonina politika, Paul Rabary, izay.
Ambatolampy Scooter sy vola 39.600 Ar no namonoany ny namany
Moto scooter marika yamaha Cygnus sy vola mitentina 39.600 Ar no namonoan'ny tovolahy iray namany tany Ambatolampy.
Ballon d’or 2021 Karim Benzema no safidin’ny Malagasy
\_Isan’ny nanana solontena tamin’ireo mpanao Gazety miisa 180 maneran-tany nomena andraikitra hifidy izay ho mpilalao mendrika indrindra na “Ballon d'or” tamin'ity taona 2021 ity isika Malagasy.
SAMPATI Faritany Analamanga Andrefana Nisokara ny taom-pitaizana 2020-2021
Nosokafana ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny FJKM Ivoanjo Anosiala ny taom-pitaizana 2020-2021 ho an‘ny Mpanazava sy Tily faritany Analamanga Andrefana.
Andro voalohan’ny OPL 2021-2022 Niondrika an-jaridainany ny Uscafoot
Niondrika tamin’ny isa 2 noho 4 tetsy amin’ny kianjan’Alarobia ny sabotsy teo ny ekipan’ny kaominin’Antananarivo na ny Uscafoot raha nihaona tamin’ny Fosa Junior nandritry ny andro voalohan’ny fifaninanam-pirenena matihanina ho
Fitaterana "téléphérique” Notsirihina ny toetry ny tany hametrahana ireo andry lehibe
Ezahina hovitaina mialohan’ny taona 2023 ilay fitaterana teleferika na transport par câble kasain’ny Fitondram-panjakana hotanterahina eto Antananarivo renvohitra hampihenana ny fitohanana lavareny.